Maqaal: Anshaxa sawir qaadidda iyo sawiradda aan ku haboonayn baraha bulshada | Jubbaland Media Online
Maqaal: Anshaxa sawir qaadidda iyo sawiradda aan ku haboonayn baraha bulshada
Posted on June 15, 2017 in Feat, Opinions, Wararka // 0 Comments
Masiibo kasta oo dabiici ah, toogasho, weerar argagixiso ama dagaal ayaa maalmahan danbe noqday arimaha argagaxa leh ee kusoo badanayay baraha Bulshada iyo shabakadaha warbaahinta. waxaa meesha ka baxay waqtiyadii ay sawirradu qaadi jireen dadka aqoonta u leh xirfadda saxaafadda iyo anshaxa sawir qaadista, ayadoo dad isticmaalaya Mobillo Casri ah ay sawirro kasoo qaadayaan Meydad gubtay, dhaawacyo halis ah iyo falal kale oo argagax leh, toosna ugu baahinaya baraha bulshada.
Sidee ayay xarumaha warbaahintu ula macaamilaan Sawirrada argagaxa leh? goormee ayay tahay mid loo cudur daari karo in la baahiyo sawir dhaawac, Meyd ama qof ku jira xaalad cabsi leh? Ma sax baa in bogga hore ee Websiteyada iyo wargeysyada kale lasoo saarto meyd dhiig daboolay, ama dhaawac halis ah oo dhiig ka daadanayo? ma sax baa in la baahiyo sawirro dad ku le’day qarax?
Dhaqaatiirta Cilmi nafsiga waxa ay ka digeen qatar ka iman karta sawirrada argagaxa leh, ayagoo sheegay in ay waxyeelo gaarsiiyaan dareenka qofka ee dhanka maxkaxda ah, gaar ahaan marka qofku arko sawir argagax leh oo aysan maskaxdiisu qaadan karin in waxa uu arkaayi ay si dhab ah u dhaceen.
Kahor inta uusan daabicin, qofka wariyaha ah waa in uu hubiyaa in sawirka uu qaadan doono uusan noqon mid argagax geliya bulshada, waa in sawirka uu kusoo xushaa in uu yahay mid la xiriira dhacdada una qalma in warka loo isticmaalo.
Kahor inta uusan daabicin, wariyuhu waa in uu arkaa haday macquul tahay in la iska ilaaliyo in la daabaco, isagoo dhinacyo badan ka eegaya habka uu u qaadan karo warbixinta uu gudbinayo sawirka.
Wariyuhu waa in uu isku dayaa in uu daabaco sawirrada aadka usoo jiidanaya dareenka dadka, ayna ku yaryihiin waxyaalaha argagax gelin kara, halka uu ka isticmaali lahaa sawirrada meydadka iyo ilmaha yar ee dhintay. Tusaale ahaan in aad daabacdo dharka ilmaha yar oo dhiig leh, waxa ay gudbineeysaa farriinta ayadoo aan argagax gelin bulshada.
Wariyuhu waa in uu hubiyaa sawirrada uu isticmaalayo in ay lamid yihiin amaba u dhigmaan kuwa ay isticmaalaan warbaahinta dalka uu joogo, arintan waxay ka hortageeysaa in wariyuhu ku xadgudbyo shuruucda iyo dhaqanka dalkaa u yaal.
Wariyuhu waa in uu ilaaliyaa shuruucda guud, sida daabacaadda sawirrada meydadka, arintaa waa in wariyuhu aad uga baaraan dagaa, sawirka ku haboon ee uu qaadan karo. Meydadka iyo arimaha ku saabsan dilalka waa kuwa ugu hadal heynta badan ee bulshada, waa in wariyuhu arimahaa maanka ku hayo islamarkaana ilaaliyaa quluubta ehellada meydka uu sawirradiisa doonayo in uu baahiyo.
Wariyuhu waa in uu hubiyaa in sawirka uu daabacayo uu raaciyo faahfaahin qoraal ah, xitaa hadii uu boos u waayo faahfaahinta, waa in uusan daabicin sawirka.
Wariyuhu waa in uu cadeeyaa in uu adeegsanayo sawirro cabsi leh, waa in uu boos ku haboon ku qoraa qoraal uu aqristaha ugu sheegayo in sawirro argagax leh ay warbixintu la socdaan.
Haddii uu wariyuhu aaminsanyahay in uu cadeeyay in sawirro cabsi leh ay la socdaan warbixintiisa, waa in uu ka fogaadaa in uu daabaco sawirrada aadka u argagaxa badan, sababo la xiriira in uusan ahayn mid ku haboon caruurta amaba falcelinta dadka daalacanaya.
Wariyuhu wuxuu u baahanyahay in uu ogyahay in sawirrada lagu daabaco Joornaallada in ay ka sameeyn badanyihiin kuwa loo isticmaalo Online-ka, sidaa darteed waa in uu tixgeliyaa in sawirrada uu is leeyahay waa kuwo bulshada qalqal gelin kara uu u adeegsadaan Websiteka, maadaama halkaasi loogu digayo oo qofka uu arki karo keliya hadii uu doonayo.
Weerarrada argagixiso ujeedkoodu waa in la buunbuuniyo oo bulshada lagu cabsi geliyo, Wariyhu waa in sidaa darteed uu ka taxadaraa in uu miisaamo faa’iidooyinka bulshada ugu jira sawirradaa iyo baahida loo qabo in la xakameeyo.
Wariyuhu waa in uu si gaar ah uga taxadaraa in uu daabaco sawirrada argagaxa leh oo laga soo qaaday dhacdo waxyar kahor dhacday, xilligaa oo uusan sawirku qiimo badan lahayn kuna haboonayn in war loo isticmaalo, in waqtigaa la daabaco waa arin adag in la difaaco, ehellada dadkii ay jeclaayeen ay waxyeelada kasoo gaartay dhacdada ayay dareenkooda dhibaateyn karaan, hadii ay si kadis ah ku arkaan sawirrada noocaa ah.
Wariyuhu waa in uu had iyo jeer la tashtaa tifaftireyaal aqoon leh, hadii uu ka shakiyo in uu daabaco sawirro gaar ah.
Wariyuhu waa in uu hubiyaa in dadka waxyeelada gaarta aan la aqoonsan, isagoo shucaac ku furaya wejiyadooda. Arrintan waxay si gaar ah u quseeysaa oo tixgelin u tahay qoyska iyo ehellada ay ka baxeen dadkaasi.
Wariyuhu waa in uu hubiyaa in sawirku uusan ahayn mid meel uga dhacayo sharafta qofka la sawiray, tani waa arrin muhiim ah gaar ahaan marka qofka yahay mid la aqoonsan karo.
Sawirrada dadka ku dhintay qaraxyada ismiidaaminta waa in aan lasoo bandhigin.
Waxaan rajeeynayaa in dhammaan arimahan ay ka faa’iideeysan doonaan dhalinta warbaahinta ka shaqeeysa iyo weliba dadka kale ee sawir qaadeyaasha ah ee baraha bulshada soo dhiga sawirrada argagaxa leh.
Xasan Nuur Max’ed